Fampandrosoana ifotony: mpandray anjara feno ireo manana fahasembanana | NewsMada
Manaitaitra ny tompon’andraikitra hampandray anjara ireo olona manana fahasembanana amin’ny sehatry ny fampandrosoana ny fikambanana Merci. Miantsehatra eny ifotony izy ireo amin’izany.
Anjaran’ny kaominina Talatamaty, omaly no nananganan’ny ONG Merci ny Kolejin’ny olona manana fahasembanana. Nofidiana tamin’izany koa ny solonten’ireo vondron’olona ireo hiditra ao anatin’ny rafitra fikaonan-doha eny ifotony.
Navondron’ny fikambanana Merci ireo olona manana fahasembanana ireo. Nasaina namoaka ny heviny mikasika ny fampandrosoana ifotony eny amin’ny fokontany sy ny kaominina, izy ireo. Ireo solontenany ao anatin’ny rafitra fikaonan-doha ifotony no hitondra ny hevitra ao anatin’ny drafitrasa fampandrosoana ny kaominina handraisan’ny daholobe anjara.
Tsy tafiditra tao anatin’io rafitra io mihitsy ny olona manana fahasembanana hatramin’izay ka izao entanin’ny ONG Merci izao.
Efa niasa tamina kaominina maromaro izy ireo nanentana ireo olona manana fahasembanana sy manaitra ny tompon’andraikitra ifotony ny amin’ny tokony handraisan’ireo vondron’olona ireo anjara amin’ny fampandrosoana. Tanjona ny hanokanan’ny kaominina tetibola manokana mihitsy ho an’ireo olona manana fahasembanana ireo hanamorana ny fivezivezen’izy ireo…
Nilaza ny tale mpanatanteraky ny ONG Merci , Rakotoarisoa Holiniaina fa mpandray anjara feno amin’ny fampandrosoana ireo olona manana fahasembanana ary manan-kevitra tsy azo tsinontsinoavina izy ireny.